स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास मेरो पहिलो प्राथमिकता : भक्त हमाल
२०७७ मङ्सिर ६ शनिबार ०८:००:०० प्रकाशित
काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव यही मंसिर ११ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। महासंघको यस वर्षको चुनावमा मेडिकल सप्लायर्स भक्त हमालले वस्तुगत संघको तर्फबाट स्वास्थ्यको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका छन्।
मेडिकल सप्लायर्समा २६ वर्ष बिताएका हमालले महासंघको चुनावमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरु उठाएको बताएका छन्। आर्थिकसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास उनको पहिलो प्राथमिकतामा छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठ्नुपर्ने आवाज र बाहिर ल्याउनुपर्ने मुद्दाहरु अझै पनि आउन नसकेकाले महासंघको चुनावमार्फत बाहिर ल्याउने आफ्नो प्रयास रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघको चुनावमा उनको उम्मेदवारी किन? स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनकुन मुद्दाहरु प्राथमिकतामा छन्? भन्ने विषयमा हामीले हमालसँग कुराकानी गरेका छौं। हमालको जवाफ उनकै शब्दमाः
मेरो उम्मेदवारी स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन। स्वास्थ्यका नीतिहरु पनि अझै राम्रा छैनन्।
हामीले पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ राखिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं। त्यो अहिले पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ छाता संगठन हो। त्यसैले यसको प्रतिनिधित्व गर्दै देशमा भएका समस्याहरु नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने एउटा पाटो छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन अझै आवश्यक छ। अहिले कोभिडको महामारीकै समयमा कत्तिको गुणस्तरीय सामानहरु भित्रिएका छन् त? यो ठलो प्रश्न हो।
व्यवसाय एउटा प्रणालीमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यो प्रणालीको विकास अझै पनि भइसकेको छैन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुको पहिचान छैन। उनीहरु आफैंले जिम्मेवारी बोध गर्ने वातावरण बनेको छैन।
कपडा व्यापारी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएर काम गरिरहेका छन्, जुत्ता व्यापारी पनि यही क्षेत्रमा छन्। यो सब हुनु भनेको नीति नै नभएर हो। एउटा नीति बन्नु प¥यो ताकी व्यवसायीहरुले पनि त्यो नीतिलाई लागू गर्न सकून्। राम्रा र गुणस्तरीय उपकरणहरु नेपाल भित्रन सकून्।
अस्पतालहरुको सुविधा, चिकित्सक तथा जनशक्ति तथा उपकरण नै स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण खम्बा हुन्। जबसम्म यी तीन वटा खम्बा मिल्दैनन् तबसम्म राम्रो नतिजा आउँदैन। सरकारले अस्पताल र जनशक्तिको विकास त गर्ला तर उपकरण खै त? यही नै मेरो मुख्य प्राथमिकता हो।
(हमालसँग स्वास्थ्यखबरका लागि कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित।)